कला/साहित्यशनिबार, १२ श्रावण , २०७५
सन्तान नहुँदा श्रीमतीलाई मात्र दोष दिने श्रीमान् पनि सम्झाएपछि आफ्नो उपचार गर्न तयार रहेको कथा पुस्तकमा छन् ।
त्यसलगत्तै कमलाका श्रीमान्‌ले फोन गरेर नानीको स्वास्थ्यबारे बुझे । उनले छोरीको निकै चिन्ता गरेको सुनेपछि मैले कमलालाई सोधें, “नानीका लागि किन तपाईंहरू यति धेरै चिन्तित हुनुभएको ? बच्चाहरु रोइहाल्छन् नि !”
‘बाँझी महिला, बाँझी आइमाई’ भन्ने हाम्रो समाजमा ‘बाँझो पुरुष’ भनेको सुनिंदैन । सन्तान नहुनुमा पुरुषको पनि समस्या हुनेबारे हाम्रो समाज अनभिज्ञ छ भने कतिले ‘मर्दपनको ढोंग’ बोकेर यस्तो कुरा बुझ्न पनि चाहँदैनन् ।
डा. उमाको पुस्तकले सन्तान नहुनुमा महिलाको मात्रै नभएर पुरुषको पनि समस्या हुने प्रष्ट्याएको छ । उनले उपचारपछि सन्तान जन्माउनेको कथा मात्रै नभएर उपचार असफल भएका कथा पनि पुस्तकमा समेटेकी छन् । उपचार असफल हुँदा आफैंलाई ‘डिप्रेसन’ भएको कुरा पनि उमाले लुकाएकी छैनन् ।